Waterfall Kanto Lampo, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Kanto Lampo riandrano
Riandranon'i Kanto Lampo Gianyar, na Air Terjun Kanto Lampo
Topimaso momba ny riandranon'i Kanto Lampo
Ity riandrano ity dia any atsimo atsinanan'i Bali. Izy io dia miorina amin'ny ranon'ny renirano Bangunlemah ary any avaratry ny faritanin'i Gianyar, ao amin'ny tanànan'i Beng, izay somary akaiky an'i Denpasar sy Ubud.
Tombony lehibe iray ahazoana an'i Canto Lampo ny toerana misy azy. Tsy mila mankany amin'ny riandrano amin'ny lalana tery mamaky ny vato ianao, tsy toy ny Git-Git sy Munduk. Ka tsy ho sarotra ny mitsidika azy na dia misy zaza kely aza.
Ity riandrano ity dia mahatratra ny haavon'ny 30 m. Miavaka amin'ny riandrano Bali hafa izy io. Kanto Lampo dia mijanona eo amin'ny lohasaha ary misy cascades maromaro mandriaka ny vatolampy misy onja malemy. Manomboka amin'ny fiantsonana mankany amin'ny riandrano dia mila midina ianao. Ho an'ny fanamorana dia misy tohatra goavambe ahazoana aina miaraka amin'ny elo amin'ny masoandro amin'ny sisiny. Rehefa nahatratra ny afovoany ianao dia afaka mahita ny trano fidiovana, fandroana ary efitrano fanovana miorina amin'ny tranokala misaraka. Rehefa midina etsy ambany ianao dia hahatratra ny farihy eo ambanin'ny riandrano.
Tokony avelanao eo ambanin'ny tohatra ny kiraronao, satria hanakana anao lavitra kokoa izany. Azo atao ny manakaiky ny riandrano amin'ny alàlan'ny vato sy rano fotsiny. Ny farihy dia manana halaliny ahazoana aina (faratampony - halalin'ny valahana). Malemy foana ny riaka ankehitriny, ary mafana ny rano. Ny mandeha irery irery dia mampatahotra kely satria tsy hitanao ny farany. Saingy ny mpiasa eo an-toerana dia manampy amin'ny fanomezana tanana ary manome soso-kevitra ny amin'izay tokony hirosoana.
Ny riandranon'i Kanto Lampo dia niseho vao haingana, noho izany dia mbola tsy voamarika amin'ny sari-tany rehetra. Afaka mandeha eto ianao amin'ny alàlan'ny fiara nohofana na scooter.
Ny faritry ny riandrano dia avela isan'andro manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 18 ora. 10 ny saram-pidirana. Ny kabine, ny fandroana ary ny efitrano fanovana amin'ny faritra voatokana eo afovoan'ny tohatra dia azo ampiasaina maimaim-poana.
adiresy: Bakbakan, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80515
Misy efitrano fanovana amin'ny tohatra mankany amin'ny riandrano, fandroana ary trano fidiovana - maimaim-poana
Sabotsy - 8.00-18.00
Alahady - 8.00-18.00
Sarin'ny riandrano Canto Lampo
riandrano eo amin'ny sari-tany
Riandranon'i Kanto Lampo eo amin'ny sari-tany
Ny sarintany hitanao etsy ambany dia feno an-tsehatra. Azonao atao ny mikaroka ireo teny fototra toa ny “пляж", na"scuba diving" 'riandrano" hafa. Ho valin'izay, ny sari-tany dia hampiseho marika ireo sokajy izay tianao.